တောင်ငူမှ သေဆုံးသူရဲ့ ညီမအရင်ဖြစ်သူ ပြောပါပြီ - MM Live News
တောင်ငူမှ သေဆုံးသူရဲ့ ညီမအရင်ဖြစ်သူ ပြောပါပြီ
February 22, 2019 MM Live News
တရားခံကို ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေးနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောလာတဲ့ ညီမ ဖြစ်သူ ဒေါ်မေမြတ်မွန်
တောင်ငူမြို့မှာ မြေကွက်ဂရန်သက်တမ်းတိုးကိစ္စ ပြောဆိုပြီး စကားအချေအတင်ဖြစ်ရာမှ လင်မယားနှစ်ဦးအား မသေမချင်း ကြွေသီးခေါင်းဖြင့် လမ်းမလယ်တွင် ထုသတ်သူ သားအဖအား ရဲအဖွဲ့မှဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ် ….
ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အမဖြစ်သူ ဇနီးမောင်နှံအတွက် တရားခံကို ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေးနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ညီမ ဖြစ်သူ ဒေါ်မေမြတ်မွန်က သူ့ ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာ အခုလို ရေးသားထားပါတယ်
” ကျွန်မ အထက်ကအမအရင်းပါ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်တဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု တွေကိုမရခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုတွေ ညီအမတစ်တွေ သေကွဲကွဲခဲ့ရပါတယ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးနိုင်ဖို့ အဖက်ဖက်မှလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ ” လို့သူမက ဆိုပါတယ် – နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ
တောင်ငူ လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှ ပါဝင်သူနှစ်ဦးအား ပုဒ်မသုံးခုဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်းကိုလည်း သိထားရပါတယ်..။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ ၀၇၄၅ ချိန် တောင်ငူမြို့ မင်းကြီးဆွေရပ်ကွက်နေ ရဲဝင်း (၅၁) နှစ်၏နေအိမ်၌ ၎င်းထံမှ ခြံကွက်ဝယ်ယူထားသူ ဦးစိုးလင်းသန်း (၄၉) နှစ်၊ ဇနီး ဒေါ်ချောစုစုလင်း (၄၅) နှစ်နှင့် သမီး မသော်တာထက်စံ (၁၅) နှစ် တို့သည်
ခြံကွက်ဂရမ် သက်တမ်းတိုးရန် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် အိမ်ထောင်စုမိတ္တူတို့အား လာရောက် တောင်းခံရာမှ စကားများ ရန်ဖြစ်ပြီး ထွက်ခွာလာစဉ် နေအိမ်ခြံဝင်းရှေ့အရောက် ရဲဝင်းနှင့် ၎င်း၏ဖခင် ဦးတိုးကြည်(၇၆) နှစ် တို့သည့် နောက်မှလိုက်လာကာ
ဓာတ်မီးတိုင်တွင် အသုံးပြုသည့် ကြွေသီးဖြင့် ထုရိုက်ခဲ့သဖြင့် ဦးစိုးလင်းသန်းနှင့် ဒေါ်ချောစုစုလင်းတို့ ၂ ဦးတွင် ဦးခေါင်းပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများ(စိုးရိမ်ရ)၊ မသော်တာထက်စံတွင် ဝဲချိုစောင်း၊ တံတောင် ဖူးရောင်ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာများ(မစိုးရိမ်ရ) ရရှိခဲ့၍
တောင်ငူပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကုသစဉ် ဦးစိုးလင်းသန်းနှင့် ဒေါ်ချောစုစုလင်းတို့ ၂ ဦးမှာ သေဆုံးသွားခဲ့သဖြင့်
ရဲဝင်းပါ၂ ဦး (ဖမ်းမိ) အား မြို့သစ်နယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၂၉/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၅/ ၁၁၄(လူသတ်မှု/ တုံးသောလက်နက်ဖြင့် ပြင်းထန်နာကျင်စေမှု/ အားပေးကူညီမှု)ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တရားခံကို ပွငျးထနျစှာ အပွဈပေးနိုငျဖို့လုပျဆောငျသှားမယျလို့ ပွောလာတဲ့ ညီမ ဖွဈသူ ဒျေါမမွေတျမှနျ
တောငျငူမွို့မှာ မွကှေကျဂရနျသကျတမျးတိုးကိစ်စ ပွောဆိုပွီး စကားအခအြေတငျဖွဈရာမှ လငျမယားနှဈဦးအား မသမေခငျြး ကွှသေီးခေါငျးဖွငျ့ လမျးမလယျတှငျ ထုသတျသူ သားအဖအား ရဲအဖှဲ့မှဖမျးဆီးရမိခဲ့ပါတယျ ….
ရကျရကျစကျစကျ အသတျခံလိုကျရတဲ့ အမဖွဈသူ ဇနီးမောငျနှံအတှကျ တရားခံကို ပွငျးထနျစှာ အပွဈပေးနိုငျဖို့လုပျဆောငျသှားမယျလို့ ညီမ ဖွဈသူ ဒျေါမမွေတျမှနျက သူ့ ရဲ့ Facebook ပျေါမှာ အခုလို ရေးသားထားပါတယျ
” ကြှနျမ အထကျကအမအရငျးပါ မငျးမဲ့စရိုကျဆနျတဲ့ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု တှကေိုမရခဲ့တဲ့အတှကျမိသားစုတှေ ညီအမတဈတှေ သကှေဲကှဲခဲ့ရပါတယျ ပွငျးပွငျးထနျထနျအပွဈပေးနိုငျဖို့ အဖကျဖကျမှလုပျဆောငျသှားမှာပါ ” လို့သူမက ဆိုပါတယျ
တောငျငူ လူသတျမှုဖွဈစဉျမှ ပါဝငျသူနှဈဦးအား ပုဒျမသုံးခုဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျးကိုလညျး သိထားရပါတယျ..။
၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ဖဖေျောဝါရီလ ၂၁ ရကျနေ့ ၀၇၄၅ ခြိနျ တောငျငူမွို့ မငျးကွီးဆှရေပျကှကျနေ ရဲဝငျး (၅၁) နှဈ၏နအေိမျ၌ ၎င်းငျးထံမှ ခွံကှကျဝယျယူထားသူ ဦးစိုးလငျးသနျး (၄၉) နှဈ၊ ဇနီး ဒျေါခြောစုစုလငျး (၄၅) နှဈနှငျ့ သမီး မသျောတာထကျစံ (၁၅) နှဈ တို့သညျ
ခွံကှကျဂရမျ သကျတမျးတိုးရနျ မှတျပုံတငျမိတ်တူနှငျ့ အိမျထောငျစုမိတ်တူတို့အား လာရောကျ တောငျးခံရာမှ စကားမြား ရနျဖွဈပွီး ထှကျခှာလာစဉျ နအေိမျခွံဝငျးရှအေ့ရောကျ ရဲဝငျးနှငျ့ ၎င်းငျး၏ဖခငျ ဦးတိုးကွညျ(၇၆) နှဈ တို့သညျ့ နောကျမှလိုကျလာကာ
ဓာတျမီးတိုငျတှငျ အသုံးပွုသညျ့ ကွှသေီးဖွငျ့ ထုရိုကျခဲ့သဖွငျ့ ဦးစိုးလငျးသနျးနှငျ့ ဒျေါခြောစုစုလငျးတို့ ၂ ဦးတှငျ ဦးခေါငျးပေါကျပွဲဒဏျရာမြား(စိုးရိမျရ)၊ မသျောတာထကျစံတှငျ ဝဲခြိုစောငျး၊ တံတောငျ ဖူးရောငျပှနျးပဲ့ ဒဏျရာမြား(မစိုးရိမျရ) ရရှိခဲ့၍
တောငျငူပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျကုသစဉျ ဦးစိုးလငျးသနျးနှငျ့ ဒျေါခြောစုစုလငျးတို့ ၂ ဦးမှာ သဆေုံးသှားခဲ့သဖွငျ့
ရဲဝငျးပါ၂ ဦး (ဖမျးမိ) အား မွို့သဈနယျမွရေဲစခနျး (ပ)၂၉/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၃၀၂/၃၂၅/ ၁၁၄(လူသတျမှု/ တုံးသောလကျနကျဖွငျ့ ပွငျးထနျနာကငျြစမှေု/ အားပေးကူညီမှု)ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့စဈဆေးလကျြ ရှိကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
လေးနှစ်ရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ အမွှာညီအစ်ကို နှစ်ယောက် (မန္တလေးမြို့)
မန္တလေးမြို့ကြီးရဲ့ ကြက်သီးထစရာ သမိုင်းဝင်တဲ့ သံဃာ(၂၀၀၀၀) သံဃဒါနပွဲမှာ တွေ့ရှိခဲ့သော
November 26, 2018 MM Live News
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်တန့်ဖို့အတွက် တစ်ဦးကို တစ်ဒေါ်လာပေးလျော်မယ့် လှုပ်ရှားမှု စတင်မယ်
သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခံရမှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ရဲအုပ်နှစ်ဦးရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
January 10, 2019 MM Live News